MLM Companies တွေကြောင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်လျှော့ချမလဲ ? ~ Myanmar Anti Mlm Group
MLM Companies တွေကြောင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်လျှော့ချမလဲ ?
9:12 PM Unknown
MLM Companies တွေကြောင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကို
ဘယ်လို ထိန်းချုပ်လျှော့ချမလဲ ?
MLM ( Multi-level Marketing ) ဆိုတာဟာ ဈေးကွက်ကို အဆင့်ဆင့် ထိုးဖောက်ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်တွေကိုလည်း အဆင့်ဆင့်မျှပြီး ခံစားကြတဲ့ “ဆင့်ပွါးဈေးကွက် ထိုးဖောက်နည်း စနစ်” လို့ ယူဆစရာရှိပါတယ် ။
MLM ဟာ သာမန်စီးပွားရေးမှာလို အရောင်းကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ဟာ ထုတ်ကုန်ကို စားသုံးသူ လက်ထဲကို ရောင်းချခြင်းဖြင့်သာ ဝင်ငွေရရှိတာမျိုးမဟုတ်ပါ ။
ကိုယ့်လို တခြား ရောင်းချသူတွေကို ကိုယ့်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်လို့ အဲ့ဒီ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကနေပြီး စားသုံးသူကို ထုတ်ကုန်ရောင်းချလိုက်ရင်လည်း ကိုယ်က အကျိုးခံစားခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့လို ဆင့်ပွား အကျိုးခံစားခွင့်တွေကို အနည်းဆုံး ၈ ဆင့်ကနေ ၁၆ ဆင့် ( တစ်ချို့ အဆုံးမရှိလို့တောင် ဝါဒဖြန့်လေ့ရှိကြ ) အထိ လိုက်ပြီး ပေးတဲ့အခါမှာ နောက်ဆုံး စားသုံးသူလက်ထဲ ရောက်လာတဲ့အခါ ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ အခြား အလားတူ အရည်အသွေးရှိတဲ့ ဈေးကွက်ထဲက ပစ္စည်းတွေထက် အနည်းဆုံး ၂ဆ ၊ ၃ဆ လောက် ဈေးမြင့်နေတော့တာပါပဲ ။
အဲ့လို ဈေးမြင့်လို့ ပြင်ပစားသုံးသူတွေကို ရောင်းရခက်လာတာနဲ့ တပြိုင်နက် ပြင်ပစားသုံးသူတွေကို မရောင်းချကြတော့ပဲ ကိုယ့်ဘာသာကို ဝယ်ယူသုံးစွဲကြပါဆိုပြီး ဝါဒဖြန့် မှိုင်းသွင်းကြလေ့ရှိပြီး အဲ့လို နည်းနဲ့ ကိုယ့်အောက်ကလူတွေရဲ့ ပစ္စည်းဝယ်အားအပေါ်က ရတဲ့ ဆုကြေးတွေကို အပေါ်ပိုင်းက ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အများဆုံးရယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အောက်ခြေက ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အရှုံးပြလာပြီး နောက်ဆုံး လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရလေ့ရှိပြီး အချိန် ၊ ငွေကြေး ၊ သိက္ခာ ၊ လူမှုရေး စတဲ့ အရာပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးသွားကြလေ့ရှိပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဒီ MLM စနစ်ကို နိုင်ငံ အချို့မှာ လုံးဝ မလုပ်ကိုင်ဖို့ ပိတ်ပင်ထားပြီး တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ အလွန်တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းများကိုချမှတ်ပြီး စောင့်ကြည့် ထိန်းသိမ်းနေရပါတယ် ။
*** တရုတ်မှာ MLM ကို လုံးဝပိတ်ပင်ထားပါတယ် ။ ***
MLM နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပိုမို ကိုက်ညီမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မူဝါဒကို အရင် တင်ပြပါရစေ ။ Journalist / Printed & Online Media များ နှင့် ပညာရှင်များ ၊MLM ဆန့်ကျင်သူများ ၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ အလွယ်တကူ ကိုးကားနိုင်ဖို့ပါ ။
( အကြမ်းဖျဉ်းလေးပဲ ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါရစေ ။ )
2005 မှာ ကတည်းက တရုတ်မှာ
MLM ကို လုံးဝပိတ်ပင်ထားပြီး
Direct Selling ကိုသာ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းများနဲ့ ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ် ။
In 2005, Chinese Government enactedalaw called “Regulation of Direct Sales and Regulation on Prohibition of Chuanxiao” (where Chuanxiao stand for MLM). With this regulation China makes clear that while Direct Sales is permitted in the mainland, Multi-Level Marketing is not.
Even if allowed, Direct Sales must follow several rules.
The company is required to:
> haveabusiness license,
> can only pay out one level of commission,
> the sellers have to follow an advanced training course offered by the company and by the end of the course they have to getalicense and
> the direct sellers must wearabadge to prove their status.
> In addition, the personal seller’s commission it set at 30% of the sales, including bonuses, commission, and other benefits.
Direct Selling လုပ်မယ့် Company ဟာလည်း
ဒီ စည်းမျဉ်းတွေ လိုက်နာနိုင်ရပါမယ် ။
- စီးပွါးရေး လိုင်စင် ရှိရပါမယ် ။
- အကျိုးခံစားခွင့် ကို တစ်လွှာ ပဲ ပေးရပါမယ် ။
( MLM လို အလွှာ အဆင့်ဆင့် လိုက်ပေးလို့ မရပါ ။ )
- ရောင်းချသူဟာ Company က ပေးတဲ့ အဆင့်မြင့် သင်ရိုးတွေကို တက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒါပြီးဆုံးရင် လိုင်စင် ရပါမယ် ။
- ရောင်းချသူဟာ သူတို့ရဲ့ ရာထူး/အလုပ်အကိုင် စတာတွေကို ဖော်ပြဖို့
တံဆိပ် တစ်ခုခု တပ်ဆင်ထားရပါမယ် ။
- ရောင်းချသူရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ကို ရောင်းအားရဲ့ ၃၀% ထက်
မကျော်လွန်အောင် သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ ( ဆုကြေး ၊ အကျိုးခံစားခွင့် ၊ အခြားသော ခံစားခွင့်များအပါအဝင်ပါ )
3. ( ဘာကြောင့် MLM ကို ပိတ်သလဲ ? )
Because of the multi-level payment structure, the organizers and the members at top level obtain interest illegally and, according to the Chinese Government, disturb normal economic order, and affect social stability
တရုတ်အစိုးရရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ MLM ကို သုံးတဲ့အခါ
ဒီလုပ်ငန်းကို စဦးတည်ထောင်လူတွေနဲ့ ထိပ်ပိုင်း အသင်းဝင်တွေဟာ
တရားမဝင်နည်းလမ်းများနဲ့ အကျိုးရလာဒ်တွေ ရရှိနေပြီးတော့
သာမန် စီးပွါးရေး တည်ငြိမ်လည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ် ။
လူမှုရေး အရ တည်ငြိမ်အခြေကျနေမှုတွေကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေပါတယ် ။
US , UK , Singapore လိုမျိုး MLM ကို တရား ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတွေရှိပေမယ့် အတော်လေးကို တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ပဲ ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီး
MLM Companies တွေဟာလည်း ဒီစည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လက်တစ်လုံးခြား
လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေကြတာ ပိုများပါတယ် ။
ဒီတော့ MLM ကို ဒီမှာ ဆက်ခွင့်ပြုထားမယ်ဆိုရင် အဲ့လို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်တာတွေကိုပါ
တက်တက်ကြွကြွ စောင့်ကြည့်သတင်းပေး အရေးယူဖို့ အဖွဲ့တွေ ထပ်ဖွဲ့ရပါမယ် ။
ဒီအဖွဲ့တွေက အတော်လေးကို အချိန်အား ၊ လူအား တွေ ပေးရပါမယ် ။ လာဘ်ထိုးတာကိုလည်း တောင့်ခံနိုင်ရပါမယ် ။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံလေး တစ်ခုအနေနဲ့ ဘာလုပ်တာ ပိုပြီး အဆင်ပြေမှာပါလဲ ? စဉ်းစားချင့်ချိန်ဖို့ပါ ။
MLM နဲ့ ပတ်သက်လို့ စင်ကာပူတို့ အမေရိကန်တို့မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေ
US , UK , Singapore လိုမျိုး MLM ကို တရား ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတွေရှိပေမယ့် အတော်လေးကို တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ပဲ ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
Singapore MLM Law ရဲ့ အဓိ က အချက်တွေ က ဒါတွေပါ ။
1A. > ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မယ့် အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်အတွက်
ငွေကြေးအရ စွန့်စားမှု မရှိစေရဘူး ။
( အရင်း သိပ်များတာမျိုး မဖြစ်ရဘူး ။ )
1B. > ရက် ၆၀ အတွင်း မလုပ်ချင်တော့လို့ ထုတ်ကုန်တွေကို ပြန်အပ်ရင်
Company ဘက်က ငွေ ပြန်အမ်းပေးရမယ် ။
1C. > ချမ်းသာဖို့လွယ်တဲ့ စီးပွါးရေး ဆိုတာမျိုးပြောပြီး မစည်းရုံးရဘူး ။
လူတွေကို လိမ်ညာ မစည်းရုံးရဘူး ။
ထုတ်ကုန်ရဲ့ အရည်အသွေးကိုသာ ဦးစားပေးပြီး အရောင်းမြှင့်တင်မှု လုပ်ရမယ် ။
တကယ်လို့ ငွေရနိုင်တဲ့ အလားအလာကို Company/MLMers က ပြမယ်ဆိုရင်
ဒီ MLM Company မှာ လုပ်ခဲ့သမျှ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့
- အမြင့်ဆုံး ဝင်ငွေ
- အနိမ့်ဆုံး ဝင်ငွေ
- ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ တွေကို အကုန် ပြပေးရမယ် ။
1D. > ဆုကြေးဟာ လူသစ်စုတာကနေ မဟုတ်ပဲ ထုတ်ကုန်တကယ်ရောင်းချခြင်းကနေပဲ လာရမယ် ။
Multi-level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act (Chapter 190)
2. The United States မှာက ဒီအချက်တွေနဲ့ စားသုံးသူ ၊ ပြည်သူကို အကာအကွယ်ပေးထားတယ် ။
>>> The Amway safeguard rules ( 1979 ) are:
( Source : https://www.ftc.gov/public-statements/1998/…/pyramid-schemes )
1) 10 retail customers required to get paid commission;
if you don't sell to ten different people every month,
you don't get paid multi-level commissions
ဆုကြေး ရဖို့ လတိုင်းမှာ အနည်းဆုံး လက်လီဝယ်ယူသူ
( ကွန်ရက်အတွင်းကမဟုတ်သူ ) ၁၀ ယောက်ကို ထုတ်ကုန် ရောင်းချနိုင်ရမယ် ။
မရောင်းနိုင်ရင် ဆုကြေးမရဘူး ။
( ထုတ်ကုန်ရဲ့ အရည်အသွေးကို ပြင်ပစားသုံးသူတွေရဲ့ လက်ခံမှုနဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့ သဘော )
2) 70% rule; you have to sell (or consume) at least 70% of what you ordered before you can order more
နောက်ထပ် ထုတ်ကုန် ထပ်မမှာခင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ထုတ်ကုန် ၇၀% ကို ရောင်းချ ( စားသုံး ) ပြီး ဖြစ်ရမယ် ။ ( လောဘတက်ပြီး စွတ်ဝယ်မိတာမျိုးကိုကာကွယ်တဲ့ သဘော )
3) Buyback: guaranteed buyback of unused inventory for at least 90 days, for 90% of original price (i.e. no more than 10% restocking fee)
မသုံးရသေးတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ရက် ၉၀ အတွင်း ပြန်အပ်လာရင် ၉၀% ငွေ ပြန်အမ်းပေးရမယ် ။
(လောဘကြောင့်ဝယ်လိုက်မိလည်း အချိန်မရွေး နောက်ဆုတ်လို့ရအောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့သဘော)
Amway safeguard rules က ၁၉၇၉ က ဆိုတော့ အတော်လေး ဟောင်းနေပါပြီ ။
လောလောလတ်လတ် ထွက်ထားတာကတော့ July 15, 2016 မှာ
US-FTC ( Federal Trade Commission ) က နေပြီး တော့ Herbalife ကို ဒဏ်ငွေ သန်း ၂၀၀ ချလိုက်တဲ့ အပြင် ရဲ့ စီးပွားရေး ပုံစံကို ပြောင်းလဲရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းပါ ။
ဒီ စီရင်ချက် အရ အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်
FTC and Herbalife Settlement >>>
1.> Company ကို လျှော့ဈေးနဲ့ထုတ်ကုန်သုံးဖို့ သက်သက် လာတဲ့လူနဲ့
စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ လာတဲ့လူကို ခွဲထုတ်ရမယ် ။
လျှော့ဈေးနဲ့ထုတ်ကုန်သုံးဖို့ သက်သက် လာတဲ့ဟာ ရောင်းချခွင့် ၊ ဆုကြေး ခံစားခွင့်မရှိရဘူး ။
2.> ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ လက်လီအရောင်းကနေပဲ ဆုကြေးခံစားခွင့်ရှိရမယ် ။
အနည်းဆုံး ၃ ပုံ ၂ ပုံ သော ဆုကြေးတွေဟာ လက်လီအရောင်းကနေပဲ လာရမယ် ။
( အဲ့လို ဟုတ်မဟုတ် လိုက်စစ်ရင် သိနိုင်လောက်အောင် မှတ်တမ်းထားထားရမယ် ။ )
ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ စားသုံးမှု ( ကွန်ရက်အတွင်း ရောင်းအား ) ကို အခြေခံပြီး ရတဲ့ ဆုကြေးဟာ
၃ ပုံ ၁ ပုံ ထက် မပိုရဘူး ။
3.> Company တစ်ခုလုံး အနေနဲ့ လက်ရှိ အဆင့်တွေမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဆုကြေးပေးမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ ၈၀% ဟာ တကယ့် စားသုံးသူကို ရောင်းချတာ ဖြစ်ရမယ် ။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပေးတဲ့ ဆုကြေးတွေကို လျှော့ချပစ်ရမယ် ။
4.> Herbalife ( MLM Company ) မှာ အနည်းဆုံး ၁ နှစ် လုပ်သက်မရှိသေးသူ ၊
စီးပွါးရေး သင်တန်း တစ်ခုခု မပြီးသေးတဲ့လူတွေကို “Nutrition Clubs” လို မျိုး အရောင်းဆိုင်ခွဲဖွင့်တာမျိုးတွေ လုံးဝ လုပ်ခွင့်မရှိဘူး ။
( Herbalife’s “Nutrition Clubs” ဆိုတာ
ဒီက MLM Companies တွေမှာ Stockist ဆိုပြီး ဖွင့်ခိုင်းတာမျိုးတွေပေါ့ )
Source : https://www.ftc.gov/…/herbalife-will-restructure-its-multi-… )
ဒီလိုမျိုး စည်းကမ်းတွေ ထုတ်လုပ်ရင် MLM ကြောင့် လူများစုနစ်နာနေရတာတွေကို
သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်မှာပါ ။
ဒါပေမယ့် ရေရှည်ပြဿနာက သူတို့ ( MLM Companies/MLMers တွေ ) ဒီလို စည်းကမ်းတွေ ကို စာရွက်ပေါ်မှာတင်မဟုတ်ပဲ အမှန်တကယ်လိုက်နာခြင်း ရှိ ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးဖို့မလွယ်တာပါ ။
ဒီတော့ ရေရှည်မှာက MLM ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို အများပြည်သူ သိအောင် ပညာပေးဖို့က ပို အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်မိပါတယ် ။ သိသိကြီးနဲ့ ငွေရလွယ်တဲ့ နေရာရောက်သွားပြီမို့လို့ MLM ဆက်လုပ်နေသူတွေကို တားဖို့ မလွယ်ပါ ။ နောက်ထပ် မသိပဲနဲ့ ခံလိုက်ရမယ့် လူသစ်တွေအတွက်ကို ပိုပြီး ဦးစားပေးရမှာပါ ။
ပြီးတော့ MLM မှာ အောက်ခြေကနေ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ဝင်ကာစ လူတွေရောပေါ့ ။
ကျေးဇူးပါ ။ ဒီ ပွဲကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူ တိုက်ပေးခဲ့ကြတာ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးလည်း မပါပဲနဲ့ အများနစ်နာနေတာကို မကြည့်ရက်လို့
ဝင်ကူပေးခဲ့ကြတာတွေ အတွက် လေးစားကျေးဇူးတင်လျက်ပါ ။
ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက် လုပ်စရာ ရှိတာတွေတော့ လုပ်နေရပါဦးမယ် ။
အခု ဆက်ဖော်ပြမယ့် Websites တွေ / Resource Centers မျိုး တွေကို
မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်ပေးသွားနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ ။
၁ ။ http://mlm-thetruth.com/
MLM Programs ပေါင်း ၆၀၀ လောက်ကို
နှစ် ၂၀ လောက်
MLM ( ဒါမှမဟုတ် ) product-based pyramid schemes တွေ ရဲ့
ဆိုးကျိုး နဲ့ အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြနေတဲ့ Website ပါ ။
ဦးဆောင်သူက Jon M. Taylor, ( MBA, Ph.D., ) ပါ ။
၂ ။ Pyramid Schemes, Ponzis and Multi-Level Marketing
တွေကို လေ့လာဝေဖန် ထောက်ပြရင်း အများပြည်သူကို သတိပေးနေသူ
Robert L. FitzPatrick တည်ထောင်ထားတဲ့ Websites ၂ ခုပါ ။
၂.၂။ http://pyramidschemealert.org <<< ဒီ website က ပိုပြီး Update ဖြစ်ပါတယ် ။
၃ ။ http://www.mlmwatch.org/ <<<
Stephen Barrett, ( M.D.,aretired psychiatrist ) ဦးစီးတည်ထောင်ထားတဲ့
MLM နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပညာပေး ၊ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ တရားစီရင်ထုံးတွေ စုစည်းပေးထားတဲ့ Website ပါ ။
၄ ။ http://www.pinktruth.com
Mary Kay နဲ့ တခြား MLM Companies တွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးမှ
မနှစ်သက်တော့လို့ ထွက်လာသူတွေက စုပေါင်းတည်ထောင်ပြီး
MLM ရဲ့ ဆိုးကျိုး နဲ့ အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြထားတဲ့ Website ပါ ။
MLM Companies တွေရဲ့ လာဘ်ထိုးမှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး
MLM နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေ ၊ အယူအဆတွေကို
စုစည်းလေ့လာ သုံးသပ်ပေးထားကြတာပါ ။
ဒီလို Websites / Resource Centers မျိုးတွေရှိထားရင်
အများပြည်သူကို အသိပညာပေးတဲ့ နေရာမှာ
အတော်လေး အသုံးတည့် အဆင်ပြေမှာပါ ။
ကျွန်တော်တို့လည်း စပြီး လုပ်နေသလို
တခြား လုပ်ချင်တဲ့ အသိပညာရှင် ၊ အတတ်ပညာရှင်တွေတွေ ရှိရင်လည်း
လိုအပ်တဲ့ ဒေတာတွေ ကျွန်တော်တို့ ကူညီပေးပါ့မယ် ။
အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် နဲ့ ဒီ MLM စနစ်ဆိုးကို တည့်မတ် ၊ စည်းကျပ် ပေးနိုင်ရင်
ဒီ MLM စနစ် ၊ ဒီ MLM Companies တွေကြောင့်
အများရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ သိသိသာသာ လျော့ကြသွားမှာပါ ။
" ၁ ဦး ကောင်းစားဖို့ ၁ ရာ ရင်းပေးရတာမျိုး
မတွေ့ချင် ၊ မမြင်ချင်တော့ပါ ခင်ဗျာ ။ "
Admin @ MLM Companies များကြောင့် နစ်နာခဲ့သူများ နှင့် MLM စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူများ
( Facebook Group >>>
MLM ဆောင်းပါးများ / Zinzae